अन्तर्वार्ता-विचार – Page2– SidhaRekha
२०७४ श्रावण १८, बुधबार १०:५८२०७४ श्रावण १८, बुधबार १०:५८२०७४ श्रावण १८, बुधबार १०:५८ by Sidharekha Online
मरुभूमिकरणले जमिनको प्राकृतिक अवस्थालाई बिगार्छ
धिरेन्द्र बहादुर चन्द, पृथ्वीका विभिन्न भागहरुमा मरुभूमि रहेका छन् । जुन प्राकृतिक प्रकृयाबाट बनेका हुन्छन् । पछिल्लो स्थितिमा मानवीय क्रियाकलापले गर्दा प्राकृतिक वातावरणमा दबाव परी जमिनको स्थिति बिग्रिँदै गइरहेको छ । जसले गर्दा जमिनलाई मरुभूमिकरण गराउँछ । मरुभूमिकरण एक विश्वव्यापी समस्या हो । जमिनको अत्यधिक प्रयोग, तापक्रम बृद्धि, माटोको क्षयिकरण, अम्लियपनको वृद्धि आगजनी आदि कारणहरुले जमिनलाई मरुभूमिकरणतिर प्रोत्साहित गरिरहेको छ । मरुभूमिकरण क्रमबद्ध रुपमा हुने एक जटिल समस्या हो । जसले गर्दा जमिनमा ह्रास आइरहेको छ । यो प्रक्रिया निरन्तर रुपमा हुँदैन तर सुख्खा दब्बाहरु जमिनको किनाराहरुमा ठाउ– ठाउहरुमा देखा पर्दछ । मरुभुमिकरण भनेको के हो । मानविय क्रियाकलाप तथा जलवायु परिवर्तनले गर्दा सुख्खा, अर्धसुख्खा, कम ओसिलो जस्ता कुनै किसिमको जमिनमा आउने ह्रास भन्ने बुझिन्छ । प्राकृतिक रुपमा
२०७४ श्रावण ८, आईतवार १४:३७२०७४ श्रावण ८, आईतवार १४:३७२०७४ श्रावण ८, आईतवार १४:३७ by Sidharekha Online
मुलुकको राजनीतिक परिदृश्य नै बदलिन सक्ने
सीधारेखा संवाददाता || काठमाडौं, ८ साउन । अहिले मुलुक नयाँ संविधान कार्यान्वयनको दिशामा रहेको छ । लामो समयको संघर्षबाट प्राप्त उलब्धिको रक्षा गर्दै जारी भएको नयाँ संविधानपछि नेपालको आन्तरिक राजनीतिक परिवेश बदलिँदो छ । बदलिँदो परिवेशसँगै नेपालमा पछिल्लो समय निकटका दुई छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतको चासो पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । हुनत दुई छिमेकीको नेपाल-चासो कुनै नयाँ होइन । विशेषतः भारतले नेपालको आन्तरिक मामलामै राख्ने चासो धेरै पुरानो हो । नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालमा ठूल्ठूला उतारचढाव आए । सँगै चीनसँगको सम्बन्ध पनि नयाँ उचाइमा पुगेको छ । चीनसँग पछिल्लोे समय महत्वपूर्ण सम्झौता समेत भएका छन्, जसलाई भारतले नेपालमा बढ्दो प्रभावका रूपमा समेत हेरेको छ । यसरी दुई छिमेकीको चासोमा रहेको नेपालको राजनीतिमा फेरि नयाँ दृश्य सतहमा आउन थालेका छन् । हालसालैको विकसित नयाँ परिदृश्यको से
२०७४ श्रावण ७, शनिबार ०८:२९२०७४ श्रावण ७, शनिबार ०८:२९२०७४ श्रावण ७, शनिबार ०८:२९ by Sidharekha Online
डा. पुष्करराज भट्ट सुदूर पश्चिमको बैतडी जिल्लाको दशरथचन्द–४, कुमालीमा वि.सं. २०३२ असार ४ गते राधिकादेवी भट्ट एवम् गोपालदत्त भट्टका सुपुत्रका रुपमा जन्मनुभएको हो । नेपाली लघुकथामा प्रथम विद्यावारिधि गर्ने भट्टका लघुकथाको सिर्जनासँग सम्बन्धित कृतिमा कर्मयोद्धा (२०५९), मुक्तिदूत (२०६२), एक थोपा सागरको (२०६४, नेपाली एवम् डोट्याली दुवै भाषामा) रहेका छन् । यसबाहेक यिनले नवप्रज्ञापन पत्रिकाको लघुकथा विशेषांकको सम्पादन (२०७३) एवम् नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित प्रज्ञा आधुनिक नेपाली लघुकथा (२०७४) को सम्पादनसमेत गरेको पाइन्छ । यी सम्पादित कृति नेपाली लघुकथाको अध्ययनका सन्दर्भमा उपयोगी कृति हुन् । नेपाली लघुकथासँग सम्बन्धित पुरस्कार स्थापना गर्ने प्रथम व्यक्तिका रुपमा समेत भट्टलाई चिनिन्छ । यसै सन्दर्भमा आफ्ना हजुरबुवा हजुरआमाको नाममा लघुकथाको नाममा पद्मा रामचन्द्र लघुकथा सम्मान स्थापना गरेको
२०७४ जेष्ठ २६, शुक्रबार ०९:२५२०७४ जेष्ठ २६, शुक्रबार ०९:२५२०७४ जेष्ठ २६, शुक्रबार ०९:२५ by Sidharekha Online
कृष्ण बोहरा यात्री समाजको संरचना मनोविज्ञान तथा विकासको बाटो तय गर्नमा त्यो देशको राजनीतिक दर्शन के कस्तो छ र त्यसलाई प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरुले कसरी प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ । मानव सभ्यताको विकासको लामो चरणमा संसारका विभिन्न देशहरुमा ठूला-ठूला क्रान्तिहरु भए । ती क्रान्तिहरुले कतिपय देशको अस्तित्व नै समाप्त भयो भने कतिपय देश आफ्नो अस्तित्व पुनर्स्थापित गर्न सफल भए । फरक-फरक विचार वाद र राजनीतिक प्रणालीलाई अवलम्वन गर्दै मानव सभ्यताको निरन्तर यात्रा आजको समयसम्म आइपुगको छ । संसारका विभिन्न देशहरुमा अवलम्बन गरिएका शासन व्यवस्था र ती व्यवस्थाको प्रयोगलाई हेर्दा धनी देशहरुमा पद्धतिको अवलम्बन गरेको पाइन्छ । त्यहाँ एउटा सिस्टम निरन्तर चलेको पाइन्छ । तर गरिब भनिएका र विभिन्न कारणले गरिब बनाइएका देशहरुको राजनीतिक, शैक्षिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा धार्मिक संरचना आत
२०७४ बैशाख ७, बिहीबार १५:३२२०७४ बैशाख ७, बिहीबार १५:३२२०७४ बैशाख ७, बिहीबार १५:३२ by Sidharekha Online
प्रतिगमन कि ऐतिहासिक निर्वाचन, फैसला जनताको
सत्ता गठवन्धनमा सिमित रहेका अथवा विपक्षमा वहस गरी रहने नेताज्यूहरु हो ! अव नेपालको इतिहासमानै पहिलो पटक हुन गइरहेको स्थानीय तहको ऐतिहासिक निर्वाचन गर्नुहोस र ढुक्क रहनु होस । किनकी अव यो सम्विधानको सफल कार्यान्वयन केवल जनतालेनै गर्न सक्ने छन र गर्ने छन पनि । तर निर्वाचन अवश्य गर्नु होस । जनतामा अधिकार गयो, हामी त नांगै भयौं भन्ने मानसिकतामा भ«मित नहुनु होस, हैन भने तपाईंहरुको सत्ता र शासन धेरै दिन नरहन सक्छ किनकी जव जनताको विश्वास गुम्छ तव प्रतिगमनको खतरा उत्पन्न हुन्छ नै । त्यसैले स्थानीय सरकारको निर्वाचन गर्नु सरकार लगायत गणतन्त्रमा मात्र वाँच्न सक्ने दलहरुका लागि वाध्यता हो भने जनताका लागि अत्यावश्यकता हो । आम जनता स्थानीय सरकार गठन गर्न आतुर छन । नेपालको इतिहासमानै पहिलो पटक जनताले पाइ रहेको यस महत्वपुर्ण अवशरको घडीलाई सफल पार्नु सवैको दायित्व हो । विशेष गरी उनीहरुको त झन वढी दायित्
२०७३ फाल्गुन ७, शनिबार १५:०८२०७३ फाल्गुन ७, शनिबार १५:०८२०७३ फाल्गुन ७, शनिबार १५:०८ by Sidharekha Online
प्रजातन्त्र भनेको जनकेन्द्रीत शासन ब्यवस्था हो । शासनमा जनताको सहभागिता रहन्छ र शासनको केन्द्रबिन्दुमा जनतानै रहन्छन । निर्बाचन हुनु मात्र प्रजातन्त्रमा प्रयाप्त हुदैन । निर्बाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र सबैको पहुँच योग्य भएको हुनु पर्दछ । अमेरिकि भुतपुर्ब राष्ट्रपती अब्राहम लिंकन को भनाईमा जनताका लागि जनताद्वारा र जनताकै निम्ति गरिने शासननै प्रजातन्त्र हो । नेपालको संबिधान २०७२ मा सार्बभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहने ब्यवस्था अनुरुप नेपाली जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले शासन गर्दै छन । प्रजा भनेको जनता र तन्त्र भनेको शासन हो । यसकारण प्रजातन्त्र भन्नाले जनताको शासन भन्ने बुझाउछ । प्रजातन्त्रमा सम्पूर्ण जनताको जीउ धनको सुरक्षा गर्ने अधिकार सरकारको हुन्छ । जनताका प्रतिनिधिले सरकारमा गई शासन गर्न थाले पछि जनताको हित र रक्षाको लागि शासन संचालित हुनु पर्दछ र आम जनताले आफु सुरक्षित भएको महशुस गर्न पाउ
२०७३ फाल्गुन ३, मंगलवार १०:४५२०७३ फाल्गुन ३, मंगलवार १०:४५२०७३ फाल्गुन ३, मंगलवार १०:४५ by Sidharekha Online
भ्यालेन्टाइन डे यानि प्रणय दिवस
भनिन्छ पे्रम विनाको संसार हुन सक्दैन । प्रेमनै सवै भन्दा पवित्र हुन्छ र प्रेमनै जीन्दगीको एक अद्भूत आकर्षण पनि हो जसमा मानव सभ्यता विकसित हुँदै प्रदर्शित भइ रहेको हुन्छ । पे्रमलेनै संसारलाई सून्दर वनाएको हुन्छ । यदि संसारमा कुनै दिन पे्रम रहँदैन भने मानव सभ्यता पनि रहने छैन । मानिस मात्र हैन चर चराचर जगतका सवै प्राणीहरु पनि प्रेम विना रहन असम्भव छ । प्रकृतिका हरेक सृजनाले जगतमा सृजित र विकसित हुनका लागि पनि निरन्तर प्रेम गरिनै रहेका हुन्छन । मान्छेको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि प्रत्येक हृदयले पे्रम चाही रहेको हुन्छ, पे्रम खोजि रहेको हुन्छ र पे्रम गरि रहेको हुन्छ । पे्रम हरेकको कामना हो, आकाँक्षा हो, चाहाना हो, आवश्यकता र लक्ष्य पनि हो । मानिस नमरुन्जेल सम्म पे्रमको भोको हुन्छ त्यसैले प्रेम मानव जातिको कहिलै नमेटिने भोक यानि तिर्खा पनि हो । पे्रम र प्रणयमा फरक छ । सवै प्रेम प्रणय नहुन स
२०७३ पुष १७, आईतवार ०८:३१२०७३ पुष १७, आईतवार ०८:३१२०७३ पुष १७, आईतवार ०८:३१ by Sidharekha Online
गणतन्त्रका गद्दार हैनौ भने तुरुन्त निर्वाचन गर
अरे महामुर्ख नेताहरु हो । यो के गरि रहेका छौ ? किन एैन मौकामा अनिर्णयको वन्दी वनिरहेका छौ ? व्यवस्थापिका संसद चल्न नसकेर थला परेको छ । के ताल हो तिमीहरुको ? आ आफ्नै हट कायम गर्न जोडवल चलाइ रहेका छौ । यो संसद मात्रै थला परेको हैन महामुर्खहरु हो, यो त गणतन्त्रनै थला परेको हो । सम्विधान कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानुन वन्न सकी रहेको छैन । तिमीहरु आ आफ्नै अहंकार र जीद्धीको डम्फु मात्र वजाई रहेका छौ । वाँदर प्रवृत्ति देखाउँदै गणतन्त्रको च्यादरलाई कोही यता तान्छौ कोही उता तान्छौ । तिमीहरुको चाल चलन देख्दा तिमीहरुको यही अहंकार र अज्ञानताले गणतन्त्र च्यातिएर काम नलाग्ने हुन सक्छ, ख्याल गर । के साँच्चीकै अव संसद चल्ने छैन ? उसो भए निर्वाचन लगायतका गणतन्त्रलाई मज्वुत वनाउने कानुनहरु पनि वन्ने छैनन ? अनि के निर्वाचन पनि हुने छैन ? अरे मुर्ख हो, समय कसैलाई पर्खिँदैन भन्ने कुरा सम्झाई रहनु नपर्ल
२०७३ मंसिर २५, शनिबार ०८:१६२०७३ मंसिर २५, शनिबार ०८:१६२०७३ मंसिर २५, शनिबार ०८:१६ by Sidharekha Online
ईन्द्रसरा खड्का, ‘घर शान्ति नै विश्व शान्तिको आधारः दिगो विकासका लागि हिंसा रहित समाज’ भन्ने नाराका साथ महिला हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान सुरु भएको छ । के यसले सार्थकता पाएको देख्नुहुन्छ तपाई ? कति बर्ष भयो यस्तो अभियान सुचारु गरेको ? यसको बारेमा भनीरहनु पर्दैन तर मेरो बिचारमा यो नारा नारमै सिमीत रहेको जस्तो पाईन्छ । भन्नेहरु भन्लान नेपालमा राष्ट्रपती महिला, सभामुख महिला मुख्य मुख्य पदमा महिला नै महिला अब महिलाले महिलाको अधिकार प्राप्त गरीसक्यो भनेर तर खोई समाजमा महिलाले आप्नो हक अधिकार पाएको खोई समाजमा महिलाहिंसाको अन्त्य भएको हुन त म त्यस्तो कुनै न्याय दिलाउने ओकिल पनि हैन न सत्य तथ्य छुट्याउने कुनै त्यस्तो ब्यत्ती म त समान्य एउट गाउको छोरीमान्छे, छोरीले राम्रोसंग समाजमा गएर सत्य तथ्यका बारेमा बोल्न नहुने समाजको छोरी, बाहिर गएर कुनै ठाउमा काम गर्न नहुने समाजको छोरी छाउभएपछि ८ दि
२०७३ कार्तिक २३, मंगलवार १६:५८२०७३ कार्तिक २३, मंगलवार १६:५८२०७३ कार्तिक २३, मंगलवार १६:५८ by Sidharekha Online
सरकारको सरप्राइज : जनता जिल्ल
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा नयाँ कार्याकारी निर्देशकका रुपमा कुलमान घिसिङ दशैं अगाडि मात्रै नियुक्त हुन हुनु भएको हो । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेले राजीनामा दिए पश्चात घिसिङ नियुक्त हुनु भएको थियो । विद्युत प्राधिकरणमै ११ औं तहमा कार्यरत घिसिङ खुला प्रतिस्पर्धावाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुनुभएको हो तर यस आलेखमा प्रशंग उहाँको नियुक्तिको होइन उहाँले अगाडि वढाउनु भएको योजनाको हो जसले काठमाण्डौं उपत्यकालाई लोड सेडिङ मुक्त पार्ने पक्षमा पाइला अगाडी वढाइ सकेको छ । काठमाण्डौं शहरमा नौ दश घण्टा लोड सेडिङ हुनुलाई आम मानिसले सामान्य र सहजै रुपमा लिँदै आएका छन किनकी हिउँदका दिनहरुमा पन्ध्र सोह्र घण्टा देखि उन्नाइस विस घण्टा सम्मको लोड सेडिङ सहने वानी परि सकेका नगरवासीलाई नौ दश घण्टाको लोड सेडिङले अशर गर्न पनि छाडि सकेको थियो । नेताका नारा र भाषणले शहर उज्यालो होला भनेर